VIDEO & XOG-Muddo Bil ah Kadib Xagee Ku Dambeeyey Kiiskii Caa’isha Ilyaas, Waqtigii Rafcaanka oo Dhammaaday iyo Raggii La Xukumay…
Puntlandnews.net (Garoowe)-Bil kahor maanta oo kale 12-kii May waxaa maxkamadda derejada 1aad ee gobolka Nugaal ay xukun toogasho ah ku riddey saddex kamid ah rag loo haystay dilkii iyo kufsigii Caa’isha Ilyaas Aadan.
Gudoomiyaha Maxkamada Darajada Koowaad ee dagmada ee gobolka Nugaal Shiikh Cabdinuur ayaa Ku dhawaqay go’aanka Maxkamada ee Ku Aadan Kiiska Caasho Ilyaas Aadan, waxaana uu sii raaciyey in kiiskaan rafcaan 30 cisho ah ka furan yahay.
1. Cabdishakuur maxamed Dige shiine 46 jir
2 Cabdifataax Cabdirahman Warsame, 34 jir
3. Cabdisalaan Cabdirahman Warsame 24 jir waxaa lagu xukumay dil toogasho ah. Waxes kale oo ay Maxkamadu fasaxdey 7 kale ee Eedaysanayaasha ahaa oo ay Ku tilmaamtey kuwo aan danbi lahayn.
HALKAAN RIIX SI AAD U DAAWATO MUUQAA
Haddaba xagee ku dambeeyey kiiskii marxuumad Caa’isha Ilyaas Aadan ee ragga loo xukumay, miyaa rafcaan laga qaatay haddii aysan jirin wax rafcaan ah oo laga qaatay goormaa lafulinayaa xukunkooda iyo qodobo kale.
Mid kamid ah qareenadii u doodayey 11 ruux ee loo haystay dilka Caa’isha Ilyaas isla markaana saddexda kamid ka ah lagu helay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa qaabkii wax u dheceen iyo halka xaalku marayo.